Man United & Chelsea Oo Guulo Waa Weyn Isagu Jawaabay, Tartanka Kaalinta 4aad Oo Kululaaday & Labada Kooxood Oo Wadada Guusha Ku Soo Noqday | Laacib.net
January 11, 2020 Balaleti 2
Manchester United ayaa ku soo laabatay wadada guusha ka dib markii ay 4-0 ku qaarjiyeen kooxda Norwich City oo marti ku aheyd garoonka Old Trafford, iyadoo Red Devils ay soo gashay kaalinta shanaad ee kala sareynta iyagoo shan dhibcood ka danbeeya kooxda kaalinta afaraad ee Chelsea kuwaasoo iyagana 2-0 ku xaaqay kooxda Burnley oo marti u aheyd.
Red Devils ayaa jawaab celin fiican ka bixisay guuldaradii Arsenal ka soo gaartay kulankoodii ugu danbeeyay ee horyaalka iyagoo si fiican ku bilowday kulankii maanta ee Old Trafford.
Waxay hogaanka u qabteen ciyaarta daqiiqadii 27aad markii Juan Mata uu karoos baas fiican ah ka soo dhigay garabka midig iyadoo Marcus Rashford uu shabaqa ku taabtay. Weeraryahanka Ingariiska ayaa gool ugu dabaaldegay kulankiisii 200aad ee Manchester United.
Goolkaas ayaa lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta, laakiin Man United ayaa goolal kale dhalisay qeybtii labaad iyagoo ciyaarta maamulayay min bilow ilaa dhamaad.
Daqiiqadii 50aad Man United waxaa loo dhigay rigoore markii Rashford uu garabka bidix ee xerada goolka ku fasaxay Williams waxaana ku soo baxay oo qalad ku galay goolhaye Krul.
Rigoorada waxaa u soo istaagay Marcus Rashford kaasoo gool u sarifay inkastoo Krul uu kubada cagta ku taabtay hadana waa uu awoodi waayay inuu celiyo.
Man United waxaa goolka seddexaad u saxiixay Anthony Martial ka dib karoos kale oo fiican oo uu soo dhigay Jaun Mata, waxaana madax ku dhaliyay weeraryahanka Faransiiska oo si weyn gool ugu baahnaa.
Williams ayaa iska qasaariyay fursad dahabi aheyd oo uu kaliya u baahnaa inuu shabaqa ku taabto ka dib baas uu goolka soo hordhigay Periera laakiin madaama ay kubada boodboodeysay darbadii uu ku qabtay waxay dulmartay birta goolka.
Red Devils ayaa waxaa soo wajahay walwal markii la bedelay Marcus Rashford daqiiqadii 60aad isagoo si toos ah u aaday qolka labiska, waxaana laga baqayaa in dhaawac uu soo gaaray.
Weeraryahanka da’da yar Greenwood ayaa ciyaarta hurdo u diray daqiiqadii 76aad markii uu dhaliyay goolkii afaraad ee ciyaarta isagoo kubad darbo taraarax ah ka tuuray banaanka xerada goolka oo uu dhanka bidix ka dhaliyay goolhaye Krul.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 4-0 oo ay Man United ku xasuuqday kooxda martida u aheyd ee Norwich City.
Dhanka kale kooxda Chelsea ayaa iyagana sii xajistay booska kaalinta afaraad markii ay 3-0 ku xaaqeen kooxda Burnley oo marti ugu aheyd garoonka Stamford Bridge, iyadoo Blues ay shan dhibcood oo nadiif ah ka sareyso kooxda kaalinta shanaad ee Man United.
Chelsea ayaa iyagana sidoo kale maamulayay kulankaan, iyagoo hogaanka u qabtay ciyaarta markii rigoore loo dhigay daqiiqadii 26aad. Lowton ayaa qalad kula galay xerada ganaaxa dhexdeeda xiddiga Blues Willian.
Waxaa rigoorada u soo istaagay Jorginho kaasoo dhinac qaldan u diray goolhayaha islamarkaana hogaanka u dhiibay Chelsea, waana rigooradii shanaad ee uu tuuro islamarkaana uu dhaliyo xilli ciyaareedkan xiddiga Talyaaniga.
Chelsea ayaa hogaankeeda sii dheereysatay isla qeybtii hore ee ciyaarta, waxaa karoos fiican garab midig ka soo qaaday James iyadoo madax fiican uu ku dhaliyay weeraryahan Tammy Abraham iyadoo goolhayaha Burnley uu qalad weyn ku lahaa inuu difaacan waayo kubada.
Waxaa qeybtii hore lagu kala nastay iyadoo Chelsea ay ciyaarta ku hogaamineyso 2-0, laakiin durbadii ay bilaabatay qeybta labaad Chelsea ayaa heshay goolka seddexaad oo uu u saxiixay Hudson-Odoi.
Kubad uu soo qaaday Azpilicueta oo si ciriir ah ku dhaaftay Tammy Abraham ayuu Hudson-Odoi shabaqa ku dhejiyay, iyadoo VAR ay hubisay inuu offside jiray laakiin waa ay ansixiyeen goolka.
Chelsea ayaa abuurtay fursado kale oo fiican oo ay ku dhalin kareen goolal badan iyadoo Willian, da’ yarka James iyo Hudson-Odoi ay wacdarro dhigayeen.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 3-0 oo ay Chelsea ku xaaqday Burnley iyagoo sii xajistay booskooda kaalinta afaraa.
Shaxda Rasmiga Ah Ee Chelsea vs Burnley - Waa Maxay Sababta Lampard Uu Uga Soo Tagay N'Golo Kante Iyo Christian Pulisic?
Shaxda Rasmiga Ah Kulanka Man United vs Norwich City - Miyuu Harry Maguire Kusoo Bilowday Shaxda Red Devils?
2 responses to “Man United & Chelsea Oo Guulo Waa Weyn Isagu Jawaabay, Tartanka Kaalinta 4aad Oo Kululaaday & Labada Kooxood Oo Wadada Guusha Ku Soo Noqday”
Wara kan webb qoraayo maxa so cabtey si fiican iskaga fiiri natiijada United wa 4-0 United
adiga intaadan dadka aflagaadeen okiyaalo soo iibso saqajaanyahow